Chii chinonzi vocha? | Ehupfumi Zvemari
Chii chinonzi vocha?
Jose recio | | makambani, Negocios
Kana iwe uchinyatso kubatana nenyika yekudyara nemari, hapana mubvunzo kuti iwe wakanzwa pane kanopfuura kamwe chiitiko chinonzi chisungo. Icho chimwe cheiyo akajairika mafomu ekudyara kuita kuti kuchengetedza kwacho kubatsire. Nekudaro, hachisi chigadzirwa chakareruka nekuti chine mashandisirwo akasiyana anozivikanwa nevashandisi vane ruzivo rwakawanda mu mari yemari. Kusvika padanho rekuti chisungo chinotaurwa nezvacho zvakapusa, asi dzimwe nguva hazvinyanyo kujekesa nezvemakanika ayo ekudyara mari yedu.
Chekutanga pane zvese, hakuzove nesarudzo kunze kwekutarisa kududziro yakajairika yeshoko rehupfumi iri. Huye, chisungo chiri pamusoro pezvose zvine simba chikwereti chemari chinoshandiswa neese akazvimirira uye ehurumende masangano. Iyo bhonasi ndiyo imwe yenzira dzekushongedza iyo chikwereti, yakatarwa kana inoshanduka kuchengetedzeka yemari. Naizvozvo, hazvireve hazvo kuti inofanira kubva kumisika yemari, sevamwe vatengesi vadiki nepakati vanotenda panguva ino.
Chero zvazvingaitika, uye kuitira kuti uzvinzwisise zvirinani, imari yemari yakanyorwa pamisika uye yaunogona kuhaya chero nguva kuti zviunganidzwe midziyo ive nepundutso. Asi sekureva kwazvinoita kuti zvinogona kubva kumisika dzakasiyana uye nekudaro une nzira dzakawanda dzekudyara mari. Kubva pakutengwa kwezvikomberedzo zvisungo kudengu re zvisungo zvakabatanidzwa muhomwe yekudyara. Ehezve, panguva ino iwe une nzira zhinji dzekuvhura zvinzvimbo mune ino inokosha yemari nhumbi. Kupfuura zvaunogona kufunga nezvako kubva pakutanga. Iwe unoda here kuziva zvimwe zvakakosha uye panguva imwechete inoshanda?
1 Bond: yakapihwa nehurumende
2 State zvisungo, zvakanyanya kutsika
3 Dzoka pazvisungo zvenyika
4 Changamire zvisungo zvedzimwe nyika
5 Corporate zvisungo: yakawanda purofiti
Bond: yakapihwa nehurumende
Iyi ndiyo fomu yekudyara iyo inosunganidzwa zvakanyanya kune ichi chigadzirwa chemari. Kakawanda nguva dzose patinotaura nezvezvisungo, hongu, isu hatisi kureva kune iyi chaiyo fomu yekudyara. Kupfuura dzimwe nzira dzehunyanzvi uye pamwe kunyange dzakakosha. Huye, chisungo chine chikwereti chengetedzo chinogona kupihwa nehurumende (yenyika, matunhu, matunhu ehurumende, nezvimwewo). Zviri nyore kuti iwe uzvirangarire kubva zvino zvichienda mberi, nekuti iyo nharaunda dzakazvimiririra yenyika yedu vari zvakare vanopa ichi chemari chigadzirwa. Catalonia, Madrid, Asturias, iyo Nyika yeBasque, Galicia, La Rioja ...
Maitiro ayo ekudyara akaomarara zvekuti sezvo njodzi yechisungo ichiwedzera, purofiti yechigadzirwa chemari ichiwedzera. Kunyangwe iwe uchizomira mungozi yekurasikirwa nemari yese kana nharaunda irikupa isingakwanise kuibhadhara kana kungozvizivisa kuti haina insolvent. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru nei goho pamabhondi ematunhu risinga fanane nguva dzose. Nedzimwe dzakakosha misiyano kubva kune imwe kuenda kune imwe, kunyange hazvo inowanzo pinda mukati huwandu hunobva kubva pa1% kusvika pa6% anenge. Chero zvazvingaitika, kuva imwe chaiyo yekudyara kwauinako panguva ino chaiyo.
State zvisungo, zvakanyanya kutsika
Pane kupokana, hurumende zvisungo ndeimwe yeiyo mamwe maitiro akajairika ekudyara kubvira makore mazhinji. Inotarisirwa pane yakasarudzika kana inodzivirirwa mushandisi mushandisi, sezvakaitwa nevabereki vako kana sekuru nasekuru mune dzimwe nguva pakanga pasina zvakawanda zvakasiyana zvemari zvigadzirwa. Mupfungwa iyi, hongu haugone kukanganwa kuti iri kirasi rezvisungo zviri kuburitswa rinounzwa pasi pehukuru hwakasiyana. Pakati peavo vanomira pane izvo zvakagadzirirwa makore matatu, mashanu uye gumi uye izvo zvinokosheswa pamwe nekujairika mukati memakore ese emari. Nekudaro, icho chigadzirwa chekudyara icho parizvino chinopa purofiti yakaderera, pazasi pe3% uye semhedzisiro yemamiriro azvino ehupfumi mudunhu reyuro.
Imwe yemabhenefiti makuru ekutora zvinzvimbo mune izvo zvinonzi hurumende zvisungo ndezvekuti ivo chikamu chehurongwa husina kana kuomarara. Iyo zvakare yakachengeteka kwazvo sezvo purofiti yayo yakavimbiswa kubva pakutanga. Nehunhu hunofarirwa nezvisungo zvemunyika ivo vanozoenda kune yako yekutarisa account pamberi. Ndokunge, panguva imwechete iwe yaunovanyorera uye zvakasiyana nemamwe marudzi ezvemari kana emabhangi zvigadzirwa izvo uchafanirwa kumirira kupera kwavo kuti uzviunganidze. Semuenzaniso zvinoitika mumatemu ekuisa mari. Icho chinhu chinokurudzira vamwe varairidzi kuti vavasarudzire ivo vachipesana nemamwe mamodheru ekudyara.
Dzoka pazvisungo zvenyika
Nezve huwandu hwechimbadzo hunogadzirwa neichi chigadzirwa chepakutanga mukudyara, zvinoenderana nehupfumi hwenyika. Izvi zvinoreva kuti munguva apo chimbadzo chiri pasi, semuenzaniso sezvazvinoitika panguva ino, purofiti yacho ichave isingagutsikane pane zvaunofarira. Kunyangwe pane izvo zvinopesana, munguva idzo maitiro ari akatarisana zvachose, iwe uchave nemikana yakawanda yekuvandudza aya epakati epakati. Uye nenzira iyi, tora 2%, 3% kana kunyangwe 4%. Kunyangwe izvozvi tiri kure kwazvo nemamiriro aya.
Kune rimwe divi, zvisungo zvehunhu izvi zvakashanduka zvisina kuenzana kubvira 2000. Kusvika zvishoma pamusoro pe5% kuve inenge iri munharaunda isina kunaka, sezviri kuitika mumakore achangopfuura. Kunyangwe panguva yekuvashandira, chiyero chemubereko icho iwe chawakabatanidza navo kuburikidza nefandesi chichagara chiri kushanda. Chero zvazvingaitika, inzira isinganetsi yekuwana purofiti diki, pasina kuita chero njodzi. Hazvishamisi kuti ndeimwe yeakanyanya hunhu hunhu hweanonzi emunyika kana nyika zvisungo.
Changamire zvisungo zvedzimwe nyika
Ehezve, iwe uri muchinzvimbo chekunyorera zvisungo zveaya maitiro uye kuti anobva kune mamwe marudzi kana enzvimbo enzvimbo. Semuyenzaniso, mhirizhonga zvisungo zvinobva kuItari, Girisi kana Portugal. Ndivo vane rwendo rurefu kwazvo maererano nerubatsiro rwavo. Asi njodzi dzakakura nekuti dzinobva kune dzakanyanya kusagadzikana hupfumi uye dzinogona kurasikirwa nemari yakawanda mukushanda uyezve zvinopfuura zvaunogona kuona kubva pakutanga. Iwe unofanirwa kuziva kuti mamiriro ehupfumi hwenyika irikubuda akaita sei nekuti unogona kuwana zvinopfuura kamwe kushamisika kubva zvino zvichienda mberi.
Pane zvakasiyana, iyo yakachengeteka nyika chisungo chiGerman uye izvo zviri nani kuzivikanwa se bund. Hazvishamise kuti inokupa iyo yakanyanya kuchengetedzeka inomiririrwa nesolvency yehupfumi hwayo. Kunyangwe mukudzoka purofiti yayo haina kunyanya kukwirira nekuda kweichi chimiro chemabond dzenyika. Mupfungwa iyi, chimwe chigadzirwa chakakosha ndezvisungo zveUnited States uye icho chiri muchikamu chakanaka cheiyo portfolio yevadiki nepakati varimi. Zvimwe kuburikidza nekutenga kwayo kwakananga kana kuburikidza nemari yekudyara inoenderana nemari yakatarwa.
Corporate zvisungo: yakawanda purofiti
Kune rimwe divi rakatarisana neaya anonzi emakambani mabond kana anozivikanwa zviri nani seboka. Aya maitiro mune yakatarwa mari misika inoita kuti zvikwanise kuvandudza purofiti yavo, kunyangwe iine njodzi mukushanda. Mune fomati iyi zviri nyore kuwana mubereko padyo ne5%. Ivo vanobva kumakambani uye havafanirwe kunge vakanyorwa pamisika yemari. Imwe yemabhenefiti ayo akakosha ndeyekuti iwe une huwandu hwakawanda hwezvisungo zvehunhu uye pamusoro pezvisungo zvenyika kana zvematunhu. Kugona kusarudza pakati pemakambani emitsara dzakasiyana yebhizinesi.
Mukati meichi chikamu, chimwe cheanomiririra zvisungo ndiwo anotendeuka. Kana iwe usingazive, iwo ndiwo anogona kuchinjaniswa kune achangobva kupihwa masheya pamutengo wakatemwa kare. Ichi chikumbiro chekutanga chekubatanidza mari yakasarudzika uye yakamisikidzwa kuitira kuti nenzira iyi huwandu hwechimbadzo hunopihwa nerudzi urwu rwezvigadzirwa zvemari iwe ugokwira Kusvika padanho rekuti purofiti iri zvakare yakakura, njodzi dzaunofanira kutora nekirasi ino yehupfumi hwakaomesesa.
Chekupedzisira, iwe haugone kukanganwa nezve modhi yakawana kukosha kukuru mumakore achangopfuura, senge junk bond. Kusvika padanho rekupa iyo goho repamusoro sezvavanotarisirwa sekuchengetedzeka kwengozi. Izvo hazvikurudzirwe zvakanyanya kuhaya nekuti kuburikidza nazvo pane zvimwe zvakawanda zvaunogona kurasikirwa pane kuwana. Kufanana neaya anonzi anogara aripo echikwereti zvisungo, izvo mune zvese zviitiko zvisingafunge nezvekudzoka kwemukuru wechikoro, asi asi kurudzira kubhadhara mubereko zvachose
Sezvawaona, kune akawanda mabond anowanikwa mumisika yemari. Pazvinhu zvese nemaitiro uye izvo zvinokwanisa kushanda pane dzimwe nguva kuti kuchengetedza kwako kubatsire. Engave ega kana musanganiswa nezvimwe zvigadzirwa zvemari. Izvi zvinoenderana neprofile iwe yaunounza sediki uye wepakati investor nguva dzese. Seimwe yedzakasarudzika dzimwe nzira dzekuchengetedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Negocios » Chii chinonzi vocha?
Ndeipi nhamba yangu yekuchengetedzeka munharaunda?
Iko kupi kwekudyara kuti uwane iyo yakanaka purofiti